Miyey isku xiran yahiin doonista Man United ee Bruno Fernandes iyo mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda? – Gool FM - Idman News
Miyey isku xiran yahiin doonista Man United ee Bruno Fernandes iyo mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda? – Gool FM
(Manchester) 13 June 2019. Man United ayaa lagu soo warramayaa iney u dhaqaaqeyso saxiixa xiddiga reer Portugal – Bruno Fernandes kaas oo wacdaro aan caadi aheyn ku muujiyay kooxdiisa fasalkii lasoo dhaafay, balse waxaa soo ifbaxay warar hoose oo sheegaya in imaatinkiisa uu ku xiran yahay mustaqbalka Paul Pogba.
Iyadoo wararkaas ay jiraan ayey hadana wadanka Portugal ka imaadeen warar kasoo horjeeda kuwaas oo sheegaya in arrinta Bruno Fernandes ee Man United aysan ku xirneen joogista iyo bixitaanka Paul Pogba,
Red Devils ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro xiddigaan heerka caalami kaas oo lagu qiimeeyo 62 Malyan oo Pound, 24-jirkaan sidoo kale wuxuu xiiso ka helayaa kooxaha Liverpool, Tottenham iyo Inter Milan.
Wargeyska O Jogo ee laga leeyahay Portugal wuxuu tabinayaa in Sporting Lisbon ay hadda ku dhawdahay iney soo afjarto heshiiska xiddigaan, sidoo kalana ay suuqa ka baadi goobeyso badalkiisa.
Dhanka kale kooxaha Juventus iyo Real Madrid ayaa xiiso u qaba Paul Pogba, balse Red Devils marnaba ma dooneyso iney la falgasho wararka xanta ah ee xiddigaan la xiriirinaya kooxaha ugu waaweyn yurub.
diid ama yeel 30 sano kadib HAMPLYO Liverpool ayaa qadeyso horyaalka Premier l…
Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Premier League Kooxaha Liverpool vs Arsenal – Miyey Gunners ka aargudan doontaa Reds?
Previous Previous post: Mogadishu Journal » Dalka Mali oo looga dhawaaqay 3-cisho oo baroor-diiq ah
Next Next post: Sacado kadib waxaa soobixi doonto isku aad ka horyaalka premier league 2019/20 …